Filimka Asad ee ay jileen wiilal Soomaali ah oo helay ablaarmarin caalami ah+SAIWRO – SBC
Filimka Asad ee ay jileen wiilal Soomaali ah oo helay ablaarmarin caalami ah+SAIWRO
Posted by editor on Febraayo 25, 2013 Comments
Filimka Soomaaliga ah ee ay jileen labo wiil oo yar yar oo Soomaali ah kana hadlaya Burcad badeeda & Kaluumaysiga xeebaha Soomaaliya ayaa qayb ka noqdey tiro filimaan helay abaalmarinta Academy Awards 2013 ee ay bixiso The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).
Filimkan oo uu qoray (director) Bryan Buckley oo ah filim sameeye u dhashay wadanka Mareykanka isla markaana uu soo saarey Mino Jarjoura oo u dhashay dalka Hungary hase yeeshee degan wadanka Canada ayaa waxaa jilay Haarun Maxamed oo 14 sano jir ah & Cali Maxamed oo 12 sano jir ahna laba wiil oo walaalo ah oo qaxootinimo ugu noolaa wadanka Koonfur Afrika oo filimka lagu sameeyey.
Filimkan ninka qoray Bryan Buckley fikrada ah in uu filimkan sameeyo waxay ku dhalatey sanadkii 2010-kii xiligaasi oo isaga iyo horin kalkaaliyaal ah ay booqdeen xerada qaxootiga Kaakuma ee ku taal xuduuda Kenya iyo Soomaaliya, waxaana halkaasi uu ka sameynayay filim ku aadan qaxootiga Soomaalida ee xeradaasi imaanayey.
Bryan Buckley, Mino Jarjoura & Rafiq Samsodien oo isagu ah nin u dhashay dalka South Afrika ahna soo saaraha filimka ee Koonfur Afrika ayaa go’aansadey inay sameeyaan filim ku saabsan burcad badeeda Soomaalida iyo sida ay ku bilowdaan gaar ahaan nolasha kaluumaysata isku badala Burcad badeeda.
Caqabada filimka sameyntiisa soo foodsaartey ayaa aheyd sidii gudaha Soomaaliya loogu dhigi lahaa iyadoo maanka lagu hayo xaalada amaan ee ka taagan Soomaaliya ayaa soo saarayaasha filimku waxay isla qaateen in filimka lagu dhigo wadanka Koonfur Afrika gudahiisa gaar ahaan magaalada Cabe Town oo leh xeeb lagu matali karo xeebaha Soomaaliya, iyadoo lala kaashanayo bulshada Soomaalida ee ku nool wadankaasi oo laga soo dhex saaro jilayaasha filimka.
Soo saarayashu waxay tageen deegaanada Soomaalidu degan tahay ee ay ugu nool yihiin qaxootiminada, iyagoo halkaasi kula kulmay waalidka labada wiil ee filimka jilaysa, kuwaasi oo kala ah Haarun & Asad.
Nolasha qoys 15 qof ka badan
Harun & Cali waxay la noolaayeen 13 ilmood oo ay walaalo ahaayeen oo isag jira gabdho iyo waliil iyo waliba labadooda waalid, waxaana nolashooda ay ku xirneyd aabahood Maxamed Mahdi oo ku ganacsan jirey wadooyinka Magaalada Cabe Town kaasi oo qoyskiisa balaaran ku quudin jiray Rooti.
Caqabada akhris qoris la’aanta
Dhibaatada kale ee filim sameeyasha soo food saartey ayaa aheyd iyadoo Haarun & Cali aanay wax aqrin karin ama qori karin, iyagoon waligood Iskool tagin, waxaase loo keenay Turjubaan u sheega waxyaabaha laga doonayo in ay sameeyan, iyadoo la yaabku uu ahaa in ay maskaxda ku xafidi jireen qaabka ay filimka u sameynayaan, hadalada ay ku hadlayaan iyo ficilada iyagoon qoraal haysan.
Filimka waxaa looga gol lahaa in labada wiil ay kala doortaan inay noqdaan burcad badeed oo ay naftooda halis galiyaan iyo inay noqdaan kaluumaysato oo ay badooda ka shaqeystaan, waxaana uu ku guuleystey 12 abaalmarin oo kala duwna, iyadoo habeenkii xaleyaa ahaa Academy Awards 85-aad ee The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), uu ku guuleystey “Best Short Film” iyadoo ay goob joog ka ahaayeen xaflada labada wiil ee Soomaalida ah.
Inkastoo abaalmarintan la siiyey 13 filim ama shakhsi oo ku kala guuleystey “Best Action Movie”, “Best Picture Film”, “Best Director” “Best Actor”, “Best Actress”, “Best Documentary”, hadana filimka labada wiil ee Soomaalida ah jileen wuxuu ku guuleystey “Best Short Film” maadama uu ahaa filim Action ah oo 18 daqiiqo ka kooban kaasi oo macno weyn xambaarsan.
Wacdarihii ka dhacay in wiilashan la geeyo Mareykanka
Markii la shaaciyey in filimka ASAD uu ka mid yahay filimaanta u soo gudbay bixinta abaalraminta Academy Awards waxaa walaac iyo madax xanuun ka dhashay sidii labadan wiil loo geyn lahaa wadanka Mareykanka, maadama aanayba laheyn wax baasaboor ah ayna qaxooti ku yihiin wadanka South Africa, iyadoo xitaa hadii baasaboor Soomaali ah loo sameeyo aanay macquul aheyn in Viso Mareykan ah ay ku helaan si fudud.
Rafiq Samsodien oo ka mid ah soo saarayaasha filimkan oo ka sheekaynayay sidii ay ugu suurtagashay inay wiilashan yar yar geeyaan wadanka Mareykanka wuxuu sheegay in uu xusuusto 24 saac xili aanu hurdin, isagoo ku jiray dadaalka sidii labadan wiil ay ugu suurtagali laheyd inay geeyaan Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angles si ay uga qayb noqdaan kooxda filimka sameysay ee abaalmarinta gudoomaysa.
Rafiq wuxuu sheegay inay ka codsadeen dawlada South Afrika in wiilasha yar yar ka saacido sidii ay ugu heli laheyd nidaam ay ku tagaan wadanka Mareykanka, waxaana markaasi ka dib dawlada Koonfur Afrika go’aansatey in ay labada wiil iyo dhamaan qoyskooda oo dhan ay siiso sharciga qaxootinimada oo u ogolaanaya inay helaan deganaansho rasmi ah oo dalkaasi ay ku noolaana ayna xaq u leeyihiin baasaboor ama Travel Document, taasi oo sahlaysa inay helaan visa.
Arintan waxaa la sheegay inay qaybta ugu weyn ka geysatey wasiirka arimaha gudaha Koonfur Afrika Naledi Pandor oo ka shaqeystey inay wiilashan iyo qoyskoodu helaan deganaanshaha wadanka Koonfur Afrika, waxaa sidoo kale gacan weyn ka geysatey safaarada Mareykanka ee Koonfur Afrika.
Sidoo kale Rafiq wuxuu u mahadceliyey Melanie Mahona oo ka mid maamulka gobolka Western Cape, Nils Flaatten oo ka mid ah shirkada Wesgro, maamulka magaalada Cape Town, shirkada Myatt International, Woolworths, Dr. Anwar Nagiah, Marcel Golding, Tahir Salie, Munier Parke & Oryx Media,iyo waliba hay’adda filimada ee The National Film and Video Foundation, kuwaasi oo dhamaantood qayb ka qaatey qarashka dhanka duulimaadka iyo deegaanka wiilashan iyo aabahood bixiyey.
Maamulayaasha filimka Asad waxay balanqaadeen in dhamaan qarashka ka soo xarooda abaalmarinta filimka ay ku bixin doonaan waxbarashada wiilashan oo haatan nolashooda iyo tan qoyskooda ay wax weyn iska badashay, kuwaasi oo haatan loo qabtey macalimiin gaar ah oo wax bara, lana doonayo inay u gudbaan heer Jaamacadeed.